China New Wallet Short Ladies Zipper Wallet Koreana Fandresena Koreana Tassel Coin Purse Card Holder Fera sy mpamatsy | Sansan
New Wallet Short Ladies Zipper Wallet Koreana Fandresena Tassel Coin Purse Card Holder Card Holder
Ity kitapo volomainty ity dia vita amin'ny fitaovana PU sy salama. Mirefy 4,7 santimetatra x 3.5 santimetatra x 0.7 santimetatra (eo ho eo amin'ny 12 cm x 9 cm x 1.8 cm) ary milanja 90 grama.
Ny firafitry anatiny anaty kitapo kely toeran'ny sary, zipper grid, bill clip, position of card, takona miafina, toerana fanovana
Bag endrika fizarana mitsangana square
Ny lanjan'ny vokatra 0.09kg
Haben'ny vokatra 12 * 9 * 1.8cm
Ny endrika fanoratana sary, ny endrika stitching be dia be, ny fampiasana kofehy vita amin'ny hoditra avo lenta, zipo tsara sy milamina tsara, dia mitondra rivo-piainana mahafinaritra sy mahasalama. Namboarina toerana 5 izy io hitahirizana karatra banky, toerana lehibe iray hitahirizana takelaka, ary toerana 1 hametrahana sary miaraka amin'ny varavarankely fitaratra mangarahara, ahafahanao mametraka ny sarin'ny olon-tianao, miaraka am-pitiavana isan'andro. Poketra vola 1 mitana amin'ny zipper, fitahirizana azo antoka amin'ny fanovana sy entana kely. Mampiasa snaps metaly avo lenta, malefaka ary tsy harafesina, mateza. Ny fehiloha zipeta tariby avo lenta miaraka amin'ny zipper metaly, malama ary tsy voatsindrona, tsara tarehy ary azo ampiharina. Ny famoronana compartement marobe dia mahatonga ny fitahirizana entana tsy zaka intsony.
Izahay dia manohy hatrany ny vokatra tonga lafatra, mifehy tsara ny antsipiriany momba ny fanodinana, ny fitaovana avo lenta, ny famolavolana feno eritreritra ary ny asa tanana an-kilasy voalohany mba hitondra anao ho fanatsarana vokatra.
Previous: New Wallet Lady fohy lamaody Koreana Zipper Tassels 2 valiny valiny
Manaraka: 2020 vehivavy vaovao poketra fantsom-baoty vehivavy lava-by
Vehivavy tsotra modely miendrika bokotra retro kely ...
Nosokafana ny kasety maoderina ho an'ny lehilahy vaovao ...